Hindisaha Magaalada UrbanMain ee Kajira Magaalada Dutchtown • DutchtownSTL.org
Hindisaha Magaalada UrbanMain ee Magaalada Dutchtown
UrbanMain waa hindise lagu xoojinayo caafimaadka, bulshada, dhaqanka, iyo fayoobaanta deegaanka ee Downtown Dutchtown. Barnaamijku waa iskaashi u dhexeeya DT2 • Downtown Dutchtown, ka Degmada Horumarinta Bulshada ee Dutchtown, Iyo Xiriirka Wadada Weyn ee Missouri, waana kii ugu horreeyay noociisa ee ka dhaca gobolka Missouri.
Sanadaha soo socda, DT2, the CID, Iyo MMSC waxay horumarin doontaa qorshayaal dib loogu soo celinayo firfircoonida Magaalada Dutchtown, guud ahaan waxaa loo tixgeliyaa inay tahay aagga jidka Meramec Street ee u dhexeeya Grand iyo Broadway. Qorshayntu waxay isticmaali doontaa Missouri Main Street's afar qodob: Abaabul, Muhiimadda Dhaqaalaha, Naqshadeynta, iyo Dhiirrigelinta. Iyadoo la adeegsanayo barnaamijka UrbanMain, qodobka shanaad — Ammaan, Nadiif, iyo Cagaar — ayaa lagu daray si wax looga qabto baahiyaha bulshada magaalooyinka.
Aagga ugu dhow ee aan ugu yeerno Downtown Dutchtown.
Hindisaha UrbanMain waxaa hagaya a guddiga hagidda oo ka kooban deggeneyaal iyo xirfadlayaal dano gaar ah ka leh mustaqbalka iyo mustaqbalka magaalada Dutchtown, iyagoo si wadajir ah ula shaqeynaya Guddiga DT2 ee Maamulka iyo MMSC. Bilaha iyo sanadaha soo socda, waxaan martigelin doonnaa dhacdooyin iyo shirar aan ku soo aruurineyno ra'yi dheeraad ah oo aan ku siineyno fursado aan kaga qeybqaadano barnaamijkan xiisaha badan.
Laga soo bilaabo Wadada Weyn ee 4 + 1 dhibic, Ururada Dutchtown waxay soo saareen shan guddi. Guddiyada-Naqshadeynta, Muhiimadda Dhaqaalaha, Dhiirrigelinta, Abaabulka, iyo Nadiifinta Cagaaran iyo Cagaar-waxay u warbixin doonaan DT2 iyo guddiga CID-da Dutchtown Guddiyadu waxay ka kooban yihiin xubno bulshada ka mid ah kuwaas oo hagi doona oo qabanaya shaqada si Dutchtown looga dhigo xaafad ka wanaagsan dadka oo dhan. Waxaad ka heli kartaa wax badan oo ku saabsan guddiyada oo iska qor dutchtownstl.org/committees.
Iyada oo qayb ka ah barnaamijka Main Main, DT2 iyo Dutchtown CID ayaa kiraystay a Maamulaha Kobaca Dutchtown. Maareeyaha Kobaca wuxuu gacan ka geysan doonaa la macaamilidda bulshada iyo hirgelinta Missouri Main Street afarta qodob ee loo maro. Waxaad kala xiriiri kartaa Maamulaheena Kobaca, Jessica Payne, ee jessica@dutchtownstl.org.
DutchtownSTL.org Hindisaha Magaalada UrbanMain ee Magaalada Dutchtown